N'oge gara aga, edere m banyere otu esi edebanye blogger. Saga ahụ na-aga n'ihu ka m na-enweta ngwụcha ngwụcha nke ọrụ mmekọrịta ọha na eze na-akwadoghị ndị enweghị ozi m chọrọ iji kwalite ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ahịa ha. O were obere oge iji nweta ọkwa nke kwesịrị igosi. Enwetara m email site na onye na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na Supercool Creative. Supercool bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-eme ihe nkiri na ntanetị n'ịntanetị
Meltwater bụ ezigbo onye nkwado maka blọọgụ anyị. Anyị na ha mere webinar mba ụwa na ha na ntanetị mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nke juru n'ọnụ ma nwee nnukwu nzaghachi. Anyị eruola njikere ịhapụ ha akwụkwọ ozi mbụ anyị na ha! Nkwado ahụ lekwasịrị anya na ngwaahịa ha na News na Buzz maka ọdịnala na mmekọrịta mmadụ na ibe, n'otu n'otu, mana achọrọ m iweta otu akụkụ nke ngwaahịa akụkọ ha maka ndị ọkachamara mmekọrịta ọha na eze nke na-eme ndụ m